Jet Mil စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် China Components | Qiangdi
1.the အပြင်ဘက်တွင်ဆောင်သော, အတွင်းပိုင်းထဲသို့ဝင်ခြင်းမှပစ္စည်းတားဆီး, ထို့နောက်ယို။ 2.valve နှင့် valve core သည် casting အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီးရေရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်ပုံသဏ္ဌာန်မရှိပါ။ 3.CNC လုပ်ငန်းစဉ်သည်တိကျသေချာစေသည်။
1.the အပြင်ဘက်တွင်ဆောင်သော, အတွင်းပိုင်းထဲသို့ဝင်ခြင်းမှပစ္စည်းတားဆီး, ထို့နောက်ယို။
2.valve နှင့် valve core သည် casting အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီးရေရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်ပုံသဏ္ဌာန်မရှိပါ။
နှစ်ကြိမ် Screw Cone ရောနှောစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ
DSH double screw ရောနှောမှုသည်အမှုန့်၊ အမွှာဝက်အူရောနှောခြင်း၏အလှည့်မော်တာများနှင့် cycloid လျှော့ချအစုတခုအားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။ နှစ်ခုနှစ်ခုအားဖြင့်အချိုးမညီသောရောနှောခြင်းနှင့်အတူ, အရှိန်အဟုန်မြှင့်အကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နှင့်နှိုးဆော်မြန်နှုန်းအရှိန်လိမ့်မယ်။ ရောနှောစက်ကိုလျင်မြန်စွာလည်ပတ်မှု၏အချိုးမညီသောလိမ်နှစ်ခုကမြှင့်တင်ပြီးဆလင်ဒါနံရံမှအထက်သို့စီးဆင်းသောအချိုးကျမဟုတ်သောလိမ်ကော်လံနှစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လိမ်လှည့်ပတ်ပတ်လမ်းဖြင့်မောင်းနှင်သည့်လက်မောင်းသည်လှည့်ပတ်နေသောအရာဝတ္ထုများကိုအဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်၊ ပတ် ၀ န်းကျင်အားဖြင့်မောင်းနှင်အားသည်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ရှိလိမ်ပစ္စည်းများကိုစာအိတ်အတွင်းတွားသွားစေသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်နှစ်ချက်သည်ဗဟို၏ခုံနေရာတွင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားပြီးအောက်ဘက်ရှိအရာ ၀ တ္ထုများကိုဖွဲ့စည်းကာအောက်ခြေရှိအပေါက်ကိုဖြည့်ပေးသည်။
3.Clean ဥတု & မျှမကျန်ကြွင်း
အီလက်ထရောနစ်, အဆုတ်ရောင်, လက်စွဲ (optional ကို)
ဘောလုံးအဆို့ရှင်၊ ခတ်အဆို့ရှင်၊ ဓားတံခါးအဆို့ရှင်၊ လိပ်ပြာအဆို့ရှင် (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
6.Drive:Siemens မော်တာ, cycloid သို့မဟုတ်ဂီယာလျှော့
7.Limit / ဘေးကင်းလုံခြုံမှု switch ကို (optional ကို)
8. အပူပေး / အအေးဂျာကင်အင်္ကျီ optional ကို)
Cone ရောနှော application:
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ ၁.၃ သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းအချိုးအစား၊ အမှုန့်မှုန်များသည်အတော်လေးကြီးမားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်စဉ်ကိုရောနှောနေသည့်ကြွေပြားများအတွက် ၂. သင့်လျော်သည်၊ အမှုန်အမှုန်များသည်ဖိအားကိုမကျက်၊
3. အပူ - အထိခိုက်မခံပစ္စည်းများအပူမပေးပါ;
4. အမှုန့် - အမှုန့်ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်မှုန်ရေမွှားထွက်နည်းလမ်းများမှအရည်ပေးဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်,
5. အောက်ခြေအဆို့ရှင်အဆင်ပြေသောပစ္စည်း, အလိမ်၏အောက်ခြေတွင်လ်တာမရှိ, ဒါကြောင့်ဖိအားကျွေးဖြစ်ရပ်ဆန်းမရှိကတည်းကအဆင်ပြေပစ္စည်း
အလျားလိုက်နှစ်ထပ်ဖဲကြိုးရောနှောခြင်းတွင်အလျားလိုက် U ပုံသဏ္tankာန်တင့်ကားများ၊ အဖွင့်အပိတ်များပါ ၀ င်သောအဖုံးများ၊ အလွှာနှစ်ချောင်းဖဲကြိုးရောနှောခြင်းလှုံ့ဆော်စက်၊ ဂီယာယူနစ်၊ ထောက်ပံ့မှုဘောင်၊ ဖဲကြိုးဓါးများသည်အလွှာနှစ်လွှာသာရှိသည်။ အပြင်အလွှာဖဲကြိုးသည်ပစ္စည်းများကိုစွန်းနှစ်ဖက်မှအလယ်သို့သို့ရောအတွင်းပိုင်းအလွှာဖဲကြိုးကပစ္စည်းများကိုဗဟိုမှနှစ်စွန်းသို့ပြန့်ပွားစေသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလှုပ်ရှားစဉ်အတွင်းပစ္စည်းများသည်ရေဝဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရောစပ်ခြင်းကိုရရှိသည်။
1. ပစ္စည်း: သံမဏိ 304 / 316L သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ Q235;
၂။ မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်း - ဆေးသုတ်ခြင်း (သံမဏိ)၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ သုတ်ခြင်း (သံမဏိ)၊
3. ဖဲကြိုးလှုံ့ဆော်မှု: နှစ်ထပ်အလွှာ & နှစ်ဆလမ်းညွန်;
4. ရောနှောနေသောတိုင်ကီ - အလျားလိုက်၊ U- ပုံသဏ္tankာန်၊
5. ရိုး: အလျားလိုက်, ဆွန်း, အရေးပါသောတစ်ခုတည်းရိုး;
6. ရောစပ်အချိန်: 5-15 မိနစ်;
၇။ အလုပ်လုပ်သောပုံစံ - အသုတ်ရောခြင်း၊
၈။ အမြန်နှုန်းလျော့ချခြင်း - cycloid လျှော့ချခြင်း၊
၉။ လည်ပတ်နှုန်း - ပုံသေမြန်နှုန်း;
၁၀။ အဓိကရိုးတံတံဆိပ် (Teflon) stuffing seal သို့မဟုတ် air purge seal;
၁၁။ ဖွင့်လှစ်ခြင်း: အစာထည့် ၀ င်ခြင်း၊
၁၂။ အဆို့ရှင် - အဆုတ် (သို့) လက်ဆတ်ခတ်အဆို့ရှင်၊
13. လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေ - NPT (ပုံမှန်ဖိအားနှင့်အပူချိန်)၊
၁၄။ လေးလံသောတာဝန်မဟုတ် - ရောနှောထားသောပစ္စည်းများကိုမရောနှောပါ။
15. ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: 220V 50HZ တစ်ခုတည်းအဆင့် / 380V 50HZ3အဆင့်;
16. သက်သေပြမဟုတ်သောအီလက်ထရွန်းနစ် (မော်တာ၊ အီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်၊ ထိန်းချုပ်သည့်ကက်ဘိနက်);
ရှေ့သို့ Jet Micron Grader အမျိုးအစားခွဲခြင်း
နောက်တစ်ခု: LSM ဒေါင်လိုက်စိုထိုင်းဆစက်